Atody feno saosy béchamel | Recipe
Atody fenoina miaraka amin'ny saosy béchamel
Ascen Jimenez | 26/11/2021 14:56 | Hanombohana, Resety voaendy, Resipeo hozatra
Sakafo hankafizin'ny mpianakavy. Eto ny atody nandrahoina izy ireo no mpandray anjara ary hofenointsika tonelina sy betsimitsitekiteky ary oliva mainty.
Rehefa feno dia hosaronantsika a bechamel tena tsotra. Sombitsombiny amin'ny fromazy mozzarella ety ambonin'ny tany ary ... nendasina!
Andramo izany raha te hiala amin'ny fanao andavanandro ianao. Azo antoka fa mamerina ianao.
Hanomana ny atody masaka amin'ny fomba manokana isika.
Fotoana fiomanana: 20 M
80 g ny lafarinina
90g am-bifotsy mackerel, tatatra
30 g misy oliva mainty
1 kaopy kely amin'ny betsimitsitekiteky, miaraka amin'ny ranon-javatra
Ataontsika ao anaty vilany misy rano sy sira kely ny atody mba ho masaka. Raha vao manomboka mangotraka ny rano dia tsy maintsy mahandro mandritra ny 10 minitra eo ho eo. Amin'ity tranga ity dia tiantsika ho masaka tsara ny yolk.
Manomana ny bechamel izahay. Afaka manomana azy ao amin'ny Thermomix isika, mametraka ny akora rehetra ao anaty vera ary manao fandaharana 7 minitra, 90º, hafainganam-pandeha 4. Azo atao koa izany amin'ny fomba mahazatra, ao anaty vilany lehibe iray. Azonao atao ny manaraka ny fomba nametrahako ny rohy fa miaraka amin'ny fatra izay tondroiko ao amin'ny fizarana akora (ronono 1 litatra ...).
Apetratsika ao anaty vilia ny akora misy ny famenoana.
Rehefa vita ny atody dia hosavaintsika ary tapahanay roa.
Esory ny yolks efa masaka ary ampio amin'ny akora amin'ny famenoana. Potehina moramora amin’ny fork ny famenoana rehetra.
Fenoinay ny koba efa nomaninay ny atody.
Mametraka bechamel kely ao anaty loharano na ao anaty cocotte (ny zava-dehibe dia azo atao ao anaty lafaoro izy io).
Mametraka atody ao anaty loharano izahay, eo amin'ny béchamel.
Arotsaka amin'ny atody ny bechamel.
Tetehina ny mozzarella ary apetraka eo amboniny.
Mofomamy amin'ny 180º mandritra ny 20 minitra.
Arosoy miaraka amin'ny persily voatetika kely eo amin'ny takelaka tsirairay.
Fanazavana fanampiny - Saosy Bechamel
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: levitra » fomba fanamboarana » Hanombohana » Atody fenoina miaraka amin'ny saosy béchamel
Mofo mora multigrain
Macaroni sy chorizo, nendasina